Semalt - 8 Google स्क्रैपर को प्रमुख लाभ
Google स्क्रेपर Google को लागि स्क्रैप डेटा लिङ्कहरू र ट्याबलेटहरू, स्मार्टफोनहरू वा कम्प्युटर उपकरण सजिलैसँग स्थापित गर्न सकिन्छ. शोधकर्ताहरु लाई सधै को जानकारी को लागी उनको मोडेल को समर्थन गर्न को लागी उनको सम्मोहन को साबित गर्न को लागी छ. त्यसै गरी, उद्यमहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउनको लागि निकासी डेटा चाहिन्छ र विश्वभरि बढी ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दछ - quiero saber todo sobre la fotografia. Google स्क्रैपरको केहि प्रमुख फाइदाहरू तल वर्णन गरिएको छ.
1. डेटा क्रमबद्ध गर्नुहोस्:
डेटा सामान्य रूपमा एक असंगत र कच्चा रूपमा प्रदर्शित गरिन्छ. Google स्क्रैरले यसलाई डेटा सङ्कलन गर्न र यसको आवश्यकता अनुसार यसलाई व्यवस्थित गर्न सजिलो बनाउँछ. यसले तपाईंलाई सम्पर्क नम्बरहरू, इमेल ठेगानाहरू, नामहरू र प्रयोगकर्ताहरूको साइटहरूबाट जानकारी सङ्कलन गर्न मद्दत गर्दछ. यो एक उचित निष्कर्षण उपकरण हो जुन अकार्बनिक डेटा अलग उपयोगी दिन बाट तपाईं सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा सही नतिजा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ.
2. स्क्रैप पेशेवर लिस्टिङ:
गुगल स्क्रैरको दोस्रो प्रमुख फाइदा हो कि यसले राम्रो सुविधासँग व्यावसायिक लिस्टिङ स्क्रैप गर्दछ, र तपाईंलाई डाटाको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैन।. यो उपकरण इ-कमर्स साइटहरूको लागि विशेष गरी राम्रो छ, व्यावसायिक लिस्टहरू पत्ता लगाउँदछ, डेटा व्यवस्थित गर्दछ, र तपाइँले मिनेटको कुरामा इच्छित परिणामहरू पाउँदछ।.
3. गति र सटीकता:
यस सेवाको साथ, तपाईं सटीक डेटाको आश्वासन पाउन सक्नुहुन्छ. Google स्क्रैरले छिटो नतिजाको प्रतिज्ञा गर्दछ र केहि समयमा कार्य गर्दछ. अन्य साधारण स्क्रैपर्सको तुलनामा, यो उपकरणले धेरै गुगल लिङ्कबाट एक उल्लेखनीय गतिमा जानकारी र सटीकता को प्रक्रियामा राखिएको छ।.
4. उपयोगी र बहुमूल्य जानकारीको संग्रह:
यदि तपाईं बहुमूल्य र उपयोगी भौगोलिक जानकारी इकट्ठा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो काम प्राप्त गर्न Google स्क्रैपर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।. विभिन्न वेबमास्टरहरू र संस्थाहरूले यो सेवालाई सरल रूपमा भौगोलिक र भौगोलिक जानकारी प्राप्त गर्नका लागि कार्यान्वयन गर्छन्. यसमा असाधारण सुविधाहरू छन् र त्रुटि-रहित सामग्रीको प्रावधान सुनिश्चित गर्दछ.
5. परिचालन लाभहरू:
हामी जान्दछौं कि विभिन्न स्क्रैपर्सले सीमित सेवाहरू र फाइदाहरू प्रदान गर्दछ, तर Google स्क्रैपर उच्च-प्रोफाइल र उत्कृष्ट सेवा हो।. तपाइँ यस उपकरणको साथमा दस हजार लिङ्कहरू स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ, CSV र JSON ढाँचामा डेटा बचत गर्नुहोस्, वा अफलाइनका लागि तपाईँको हार्ड ड्राइभमा सिधा डाउनलोड गर्नुहोस्।. यो प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ र कुनै पनि कम्प्यूटर वा मोबाइल उपकरण मार्फत पहुँच गर्न सकिन्छ.
6. लक्ष्यहरु गतिशील र ई-वाणिज्य वेबसाइटहरु:
Google स्क्रैपर संग, तपाईं गतिशील र ई-वाणिज्य वेबसाइटहरू लक्षित गर्न सक्नुहुनेछ।. उदाहरणका लागि, यदि तपाई अमेजन र eBay बाट जानकारी स्क्रैप गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो काम पूरा गर्न यो उपकरण सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. धेरै स्थानहरू, स्टेटहरू, जिप कोडहरू, र इमेल ठेगानाहरू सहित वेबसाइटहरू सेकेन्ड भित्र निकाल्न सकिन्छ. यसबाहेक, तपाईं विभिन्न उत्पादनहरू, तिनीहरूका विवरणहरू, र छविहरूको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ.
7. मिडिया कम्पनीहरूको लागि राम्रो छ:
मिडिया कम्पनीहरूले यस उपकरणबाट लाभ उठाउन सक्छन् र सामाजिक सञ्जाल साइटहरूबाट डेटा सङ्कलन गर्न सक्छन् र दैनिक आधारमा ट्रेन्डिङ विषयहरू खोज्न सक्छन्।. यो क्लाउड-आधारित सेवाले वास्तविक-समय डेटा प्रदान गर्दछ, तपाईंको समय बचत गर्छ, र तपाईंको कार्यक्षमतामा सुधार गर्दछ.
8. यात्रा कम्पनीहरूको लागि उपयुक्त:
यात्रा कम्पनीहरू अनलाईन पोर्टलहरूबाट डेटा स्क्रैप गर्न खोज्दै यो स्क्रैपर प्रयोग गर्नका लागि उनीहरूले काम गरे. तपाईं TripAdvisor र Trivago बाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र केही दिनमा तपाईंको आफ्नै यात्रा पोर्टल सुरु गर्न सक्नुहुन्छ.